Besfosfatny लुगा धुने पाउडर: निर्माता, विवरण, सुविधा र समीक्षा समीक्षा
अपेक्षाकृत हालै, घरेलू सामान को समतल मा पसलहरूमा तथाकथित देखा पर्न थाले फस्फेट-मुक्त पाउडर लाँड्री। हाम्रो पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री जस्तै रुझान को अधिग्रहण गर्न संयम संग प्रतिक्रिया - मूल्य हाम्रो सामान्य डिटर्जेंट भन्दा धेरै उच्च छ वास्तवमा, त्यसैले किन थप भुक्तानी? र प्रयास गर्न dared गर्नेहरूलाई किनभने लगभग फोम गठन गर्दैन पाउडर, केहि मेटाउन गर्दैन तर्क गर्न। के के यो खर्च प्राप्त गर्न चाहे, लाभ र बेफाइदा छ, लुगा धुने लुगा लागि besfosfatny पाउडर यो छ?
किन लुगा धुने पाउडर मा Phosphates थप्न?
को नवीनता आकलन गर्न, यो पहिलो ठ्याक्कै Phosphates छ के बुझ्नुपर्छ। यी संक्षारक पदार्थ पानी नरम र पाउडर डिटर्जेंट सुधार गर्न आधुनिक डिटर्जेंट मा थपिएका छन् जो छन्। पहिलो नजर मा - यी पदार्थ को एक को लाभ। तर वास्तवमा यी रसायन शरीर मा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। जो Phosphates समावेश पाउडर धोइदिनुभएर पछि, कण यी यौगिकों को लुगा रहने। पटक-पटक rinsing कुराहरू स्थिति परिवर्तन हुनेछ - यस्तो पदार्थ छैन पनि पानी धेरै पटक संग धोइदिनुभएर द्वारा हटाउन सकिँदैन। तसर्थ, यस रासायनिक पछि रगत मा अवशोषित, एक व्यक्ति को छाला मा हुन्छ। यसलाई के नेतृत्व गर्छ? अनुसन्धान सिद्ध छ यस्तो पदार्थ कि शरीर, छाला रोग, र ठूलो खुराक मा एलर्जी प्रतिक्रिया induce चयापचय अबरोध। यो पनि Phosphates हुन् भनेर उल्लेख गरेको छ , carcinogens अर्थात् क्यान्सर को विकास गर्न योगदान।
यसलाई त्यसैले पाउडर besfosfatny विकास गरिएको छ। जर्मनी, नेदरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्याण्ड, इटाली र जापान कानुनी रूपमा बेच्न वा घरेलू रसायन कि Phosphates समावेश उत्पादन निषेध छन्। अन्य देशहरूमा (फ्रान्स, स्पेन, बेलायत) 12% गर्न डिटर्जेंट यी पदार्थ सामग्री अनुमति व्यवस्था शुरू।
लुगा धुने छोराछोरीको लुगा लागि फस्फेट पाउडर: खतरालाई के हो?
विशेष सान्दर्भिक Unphosphatic पाउडर खरीद जवान आमाबाबुको लागि हुन्छ। पारंपरिक हतियार (यी रसायन युक्त) को प्रयोग देखि नकारात्मक आफ्नो बच्चाहरु को स्वास्थ्य असर गर्न सक्छ। एक छाला दाना, ज्वरो, श्वास विफलता, र धेरै अरूको उपस्थिति - र अक्सर आमाबाबुले न त डाक्टर न बच्चा को स्वास्थ्य को राज्य मा अचानक परिवर्तन पत्ता लगाउन सक्दैन। जबकि कारण छ, उदाहरणका लागि, पाउडर समावेश Phosphates धोए थियो जो बच्चा बिस्तर। नाजुक बच्चाको शरीर जस्तै संक्षारक पदार्थ गर्न अत्यन्तै संवेदनशील छ, र आफ्नो स्रोत लेट लक्षण को कारण देखा निर्धारण र हटाइ छाला र श्वास पर्चा को गम्भीर र कहिलेकाहीं पुरानो रोग हुन सक्छ।
पाउडर Phosphates बिना: लाभ
एक दशक पहिले आविष्कार लुगा धुने पाउडर, जो फस्फेट को एक सानो रकम समावेश (वा त्यस्तो कुनै पदार्थ को डिटर्जेंट मा अनुपस्थित छन्)। तिनीहरूले एक विशेष प्रविधि आधारित surfactants द्वारा उत्पादित गर्दै छन्।
Besfosfatny पाउडर निम्न लाभ छ:
सुरक्षा। यो मतलब छ, एलर्जी कारण छैन को संरचना मा carcinogenic घटक समावेश गर्दैन। साथै, पूर्ण लुगा धुने र rinsing समयमा भंग, त्यसैले कुनै रसायन लुगा मा बायाँ छैन।
यस्तो साधन चिसो पानी मा धोए गर्न सकिन्छ - पनि जटिल दाग गायब।
Unphosphatic लुगा धुने पाउडर आर्थिक छ। Housewives यो लुगा धुने मेसिन मा खन्याउन प्रयोग पारंपरिक उपकरण विपरीत, जो संक्षारक पदार्थ पाउडर निर्देशन अनुसार लागू गर्नुपर्छ समावेश गर्दैन "एक सानो थप प्राप्त राम्रो धोएका"। तपाईं भन्दा बढी भर्न भने, परिणाम ठ्याक्कै उल्टो छ - लुगा कुशलतापूर्वक साफ छैन।
साथै, फस्फेट-मुक्त डिटर्जेंट मा, आफ्नो जीवन कारण यो उत्पादन को विशेष विनिर्माण प्रविधि असीमित छ।
लाभ र विभिन्न निर्माताहरु बेफाइदा Unphosphatic पाउडर मा निम्न नजर।
micropellets प्रविधि Silan: बिना Phosphates Persil पाउडर
को सुपरमार्केट घरेलू उत्पादन निर्माता Persil को समतल मा व्यापक। कम्पनी सहित besfosfatny पाउडर लागू। सेतो लाँड्री र रंग लुगा लागि उपलब्ध एजेन्ट। यो प्रविधि को विशिष्ठ सुविधा लुगा को एक सुखद गंध प्रचार कि पाउडर समावेश ब्रान्ड स्वादिष्ट microgranules विकास हो। दुवै मार्गदर्शन र मिसिन धो लागि उपयुक्त।
यो उत्पादन उपभोक्ताहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि जितेको छ। पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री निम्न तथ्य याद गर्नुहोस्:
besfosfatny पाउडर Persil राम्रो कुरा माझ्छिन्;
को कपडा नरम छ;
तर यो उपकरण सेतो सामान गलत प्रयोग एक खैरो हुन वा धुने गुणस्तर deteriorate गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, निर्माता पाउडर को औषधिको खुराक ठीक अनुगमन गर्न संकेत गर्छ। छोराछोरीको वस्तुहरू जस्तै घरेलू उत्पादन को लागि अभिप्रेरित छैन। लागत 3-किलोग्राम प्याकेजहरू लागि 400 rubles छ।
फस्फेट बिना Galinka पाउडर
यो बिक्री र besfosfatny लाँड्री डिटर्जेंट Galinka ब्रान्ड पाउन सजिलो छ। यो उत्पादन को एक विशेष सुविधा उत्पादनहरु dermatologically परीक्षण गर्दै छन् भन्ने तथ्यलाई छ। हात र मिसिन लुगा धुने लागि डिजाइन उपकरण छ। निर्माता बाहिर पोइन्ट कि यस्तो पाउडर छोराछोरीको वस्त्र लागि उपयुक्त, यो कुनै कृत्रिम रङहरू समावेश रूपमा। सुविधा कुनै खास गन्ध छ। 250 rubles को लागि प्याकेजिङ्ग 2.5 किलो किनेको गर्न सकिन्छ।
यो besfosfatny कसरी उपभोक्ताहरु मूल्याङ्कन लाँड्री डिटर्जेंट? समीक्षा फरक पाउन सकिन्छ। केही Housewives दावी छ, Galinka पाउडर - एक उचित मूल्य मा राम्रो डिटर्जेंट कुराहरू। तर त्यहाँ उत्पादन बारे उपभोक्ताहरु को नकारात्मक दृष्टिकोण पनि हो। जवान आमा तिनीहरूले यो उपकरण को गन्ध मन छैन भनेर तर्क। निर्माता "पाउडर बिना गंध" को रूपमा उत्पादन स्थिति छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद ग्राहक समीक्षा विपरीत सुझाव। किन खरीदारों छोराछोरीको लुगा धोइदिनुभएर लागि यस्तो साधन प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दैनौं छ।
बेबी पाउडर "Tot" फस्फेट-मुक्त
बच्चा Unphosphatic पाउडर चयन गर्न के। उपभोक्ता समीक्षा "Tot" को रूपमा ट्रेडमार्क स्राव। निम्नानुसार यसको संरचना छ:
पाम तेल देखि साबुन;
को Phosphates यस भाग मा कम खतरनाक Silicates बदलिएको छन्। यो fosfanatov र zeolites, अक्सर सस्ती Unphosphatic पाउडर प्रयोग गरिन्छ जो रूपमा समावेश गर्दैन। डिटर्जेंट "Tot" कारण नरिवल तेल देखि प्राकृतिक साबुन सामग्री राम्रो Foams। यसबाहेक, यस्तो पाउडर घटक निवारण सामाग्री योगदान पुग्छ।
निर्माता अनुसार, पाउडर "Tot" besfosfatny प्रभावकारी यसलाई अक्सिजन ब्लीच समावेश भन्ने तथ्यलाई कारण सुकेको दाग संग पनि सामना। उत्पादन को मूल्य प्रति 450 ग्राम बारेमा 90 rubles छ।
मिश्रित यो उत्पादन उपभोक्ता समीक्षा। अक्सर यो पाउडर गरिबी Washes प्रदूषण छ भन्ने उजुरी फेला परेन। तर उपभोक्ताहरु उचित मूल्य, कुनै पन्जेन्ट गन्ध, सुरक्षित माध्यम संरचना आकर्षित छन्।
पाउडर को Amway बच्चा को besfosfatny
Amway बच्चा - कुनै फस्फेट, एक अमेरिकी निर्माता समावेश पाउडर को उपभोक्ताहरु, मूल्यांकन। यो एकाग्रचित्त एजेन्ट, जो प्राकृतिक इन्जाइमहरु र सक्रिय अक्सिजन पाइन्छ। यस्तो संरचना गुणस्तरीय दूषण हटाउने, कपडा मृदुकरण प्रदान गर्दछ र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, hypoallergenic छ।
फस्फेट-मुक्त पाउडर Amway बच्चा को समीक्षा
उपभोक्ताहरु उत्पादन उच्च गुणस्तर, साथै एक सुखद, लगभग imperceptible गन्ध नोटिस।
यो बेफाइदा को पाउडर को उच्च लागत समावेश गर्नुहोस्। त्यसैले, trehkilogrammovuyu प्याक लागि 1500 rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ। असुविधाको उपभोक्ताहरु तातो पानी मा सांद्र पूर्व-dilution लागि आवश्यकता महसुस। चम्चा नाप्ने छ प्रत्येक प्याकेजमा सही औषधिको खुराक निर्धारण गर्न।
फस्फेट-मुक्त पाउडर प्रयोग सिफारिसहरू
कि फस्फेट-मुक्त लाँड्री डिटर्जेंट एप्लिकेसनमा सुविधाहरू छ याद गर्नुहोस्। तपाईं निर्माताको सिफारिसहरू पालन भने, लुगा धुने गुणस्तर एकदम कम छ। त्यसैले, कसरी राम्ररी besfosfatny पाउडर लुगा धुने लागि प्रयोग गर्न:
अघिल्लो washings देखि Phosphates कुरा धुन गर्न पारंपरिक हालतमा presoaking आवश्यक छ।
यो संयोजन गर्ने लाँड्री बिगार्छ - छैन उदाहरणका लागि, क्लोरिन आधारित दाग रिमुभर, फस्फेट पाउडर बिना साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ र। निर्माता डिटर्जेंट एक श्रृंखला को प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
यसलाई कडाई प्याकेज मा संकेत औषधिको खुराक पालना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा, परिणाम बस विपरीत छ - पाउडर माटो हटाउन।
प्रायजसो, फस्फेट-मुक्त लाँड्री डिटर्जेंट तातो पानी को एक निश्चित मात्रा मा प्रयोग गर्न पूर्व पतला हुनुपर्छ जो केंद्रित छन्। पानी उम्लिरहेको एक गिलास मा 1 नाप्ने चम्चा: उदाहरणका लागि, Gallus (besfosfatny डिटर्जेंट, जर्मनी), यस्तो अनुपात मा पतला।
यसरी, besfosfatny पाउडर - लुगा धुने वयस्क र छोराछोरीको वस्त्र लागि आर्थिक र सुरक्षित माध्यम। तर यसको प्रयोग केही अवस्थाको पूरा आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र हामी यो नयाँ उत्पादन घरेलू रसायन गुणस्तर मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ।
पनरोक गद्दा लोचदार संग कवर: समीक्षा
एयर मार्कर: विवरण, फोटो, काम सिद्धान्त
आसान मानिसहरू - धेरै महत्त्वपूर्ण सहायक
ग्राफिक्स त्वरक GTX 960: विनिर्देशों, प्रतियोगिहरु संग परीक्षण र तुलना
एक मानिस मृत्यु अघि के महसुस
Friedrich Schiller "द डाँकुहरूको": काम सारांश
मूल अमिल्दो पोशाक
होटल Petunya Resort4* (टर्की / बोडरम): समीक्षा र फोटो